ब्लु भिडियो प्रकरणपछि नम्रताले अाफूलार्इ कसरी सामना गरिन् ! लेखिँदैछ उपन्यास – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal October 9, 2018 | २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १२:५०
काठमाडाैं । नेपाली फिल्म इन्डट्रीकी स्थापित नायिका नम्रता श्रेष्ठमाथि उपन्यास लेखिँदैछ । यस उपन्यासमा उनले गरेको ‘संघर्ष’ लाई फोकस गरिने बताइएकाे छ ।
ब्लु भिडियो प्रकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिको नम्रताले साहसिक रुपमा सामना गरेकाले उनले जीवनमा अाएका उतारचढाबलार्इ उपन्यासमा उतारेकाे लेखक सविन प्रियासनले बताए ।
त्यसो त प्रियासनले यो उपन्यासमा काम सुरु गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नम्रताको विषयमा लामो अनुसन्धान गरेर उपन्यास लेख्न थालेको पियासनले बताए ।
पियासनले भने, ‘ब्लु भिडियोको बारेमा भने धेरै चर्चा हुन्न । यस्तो घट्ना भएपछि धेरैले आफूलाई नै नोक्सान गर्ने काम गर्दछन् । कमजोर मन भएकाहरुले यस्तो घटना हुँदा समाजमा अनुहारै देखाउन सक्दैनन् । तर नम्रताले आफूलाई बलियो बनाएर फिल्ममा निरन्तरता दिइरहनुभयो ।’
बैशाखमा बजारमा ल्याउन लागिएकाे पुस्तककाे नाम भने फाइनल भएकाे छैन । नम्रताले ‘नोभेम्बर रेन’, ‘छड्के’, ‘क्लासिक’, ‘मेरो एउटा साथी छ’ जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
Be the first to comment on "ब्लु भिडियो प्रकरणपछि नम्रताले अाफूलार्इ कसरी सामना गरिन् ! लेखिँदैछ उपन्यास"